Njem njem: de akwụkwọ họtelụ, chọọ ụgbọ elu, ụgbọ ala mgbazinye, ...
Ndị a na-eme atụmatụ njem ichoro enyemaka? Wee webụsaịtị a bụ ihe ị na-achọ. Gbanye ebutaraof.com anyị nwere ozi kachasị mma banyere isi ndị njem na ụwa. Kwa ụbọchị, anyị na-ebipụta akụkọ Atụmatụ maka njem, ebe ị na-agaghị echefu, ụsọ osimiri kachasị mma, ọdịdị kachasị ịtụnanya, gastronomy kachasị mma na ọtụtụ ihe ndị ọzọ.
Anyị enwere ike ịnyere gị aka na njem gị?
Ma ọ bụrụ na ị na-akwadebe a mma njem na enyemaka dị gị mkpa iji tinye ụlọ nkwari akụ, na-achọ ụgbọ elu, na-ego ụgbọ ala mgbazinye,… na nke a niile na ọnụahịa kachasị mma yana ahịa niile na-ekwe nkwa. Ọ bụrụ na? Ọfọn, ebe a anyị nwere ike inyere gị aka. Jiri igwe ọchụchọ ndị a ka ị ga-enweta ọnụ ala dị ọnụ ala ma na-echegbu onwe gị maka ịnụ ụtọ ezumike gị.
Hotellọ ọrụ nchọta na ọnụ ala
Ebe ị ga-ahụ kacha mma enwere ike inye nkwari akụ. Chọta ma debe ụlọ nkwari akụ gị n'ọnọdụ kacha mma, na nkeji ole na ole yana nkwa niile.
Otu n'ime ihe bụ isi bụ ịchọta ụlọ nkwari akụ iji nọrọ ma zuru ike n'oge ezumike. Maka nke a, ọ dịghị ihe dịka ịhọrọ nke kacha mma ọnụ ala hotels nke dị na ụwa niile. Agbanyeghị na ị chere na ọ nwere ike ịbụ ọrụ dị mgbagwoju anya, ọ gaghị esiri ike na injin nchọta họtel. N'ụzọ dị otú a, naanị anyị ga-eche banyere ebe anyị chọrọ ịla n'iyi ụbọchị ole na ole.
Ozugbo anyi doro ya anya, anyi dee ya na ulo ochicho. Mgbe ọ nwụsịrị, naanị ihe ga-eme bụ ikpebi ụbọchị na ọnwa anyị ga-ezu ike. Iji mee nke a, ị ga - ahụ otu kalịnda si egosipụta. N'ụzọ dị otú a, ọ ga-adị mfe karị ịhọrọ ụbọchị. N'ikpeazụ, ị ga - enwe naanị nhọrọ ịhọrọ ọnụọgụ ndị mmadụ.
Ozugbo ejupụta ha, ha ga-apụta onyinye kacha mma na nkwalite nke hotels na mpaghara a họọrọ. Na mgbakwunye, ị nwere ike ịhọrọ nhọrọ ndị mara mma dịka ụlọ oriri na ọ allụ allụ ma ọ bụ naanị ndị na-enye gị nri ụtụtụ. Ugbu a, ị ga-enyocha ma ọ bụrụ na ọ masịrị gị ma họrọ n'etiti nhọrọ ndị a dịgasị iche. O doro anya na ha niile ga-amasị gị!
Nnukwu ụgbọ elu ụgbọ elu ọchụchọ
Aga ebe ị na-eme njem anyị nwere ụgbọ elu maka gị na ọnụahịa kacha mma. Jiri anyị search engine na-esi gị ụgbọ elu na-emesi na nnọọ ọnụ ala.
Chọọ ụgbọ elu na Rumbo
Chọọ ụgbọ elu na eDreams
Chọọ ụgbọ elu na Skyscanner
Chọọ ụgbọ elu na Atrapalo
Chọọ ụgbọ elu na Liligo
Chọọ ụgbọ elu na Lastminute
Ọ bụrụ na anyị ahọrọla ebe anyị ga-aga, yana ọbụna họtel anyị nwere ike ịnọ, anyị ga-enyocha nnweta ụgbọ elu. Chọghị nsogbu karịa nke anyị kọwaara gị. N'otu ibe, ị nwere ike ịchọpụta igwe nyocha ahụ ụgbọ ala dị ala. Ngwaọrụ nwere ihe niile ịhọrọ oke uru ma mee ka ha dịrị gị.
Enwere ọtụtụ ndị mmadụ na-eche na n'ụgbọ elu anyị tufuru akụkụ buru ibu nke mmefu ego. Ebe ọ bụ na anyị niile enweghị nnukwu mmefu ego ezumike, anyị kwesịrị ịpịtụ ntakịrị. N'ezie, n'ihi igwe nchọta ọma, ị nwere ike ịhọrọ azụmahịa ụgbọ elu maka gị. Ọnụahịa kachasị mma na ụlọ ọrụ ndị na-enye ha ga-apụta. N'otu ụzọ ahụ, a ga-egosikwa mbido ya, yana ebe njedebe na oge nke oge otu ihe ahụ. Yabụ, ọ bụrụ na ọ nwere ọnụ ọgụgụ, a ga-egosipụtakwa ya nke ọma. Ozugbo i juputara n'ọhịa a rịọrọ na njin ọchụchọ, ị ga-enweta nkwa niile ị ga - enweta yana nsonaazụ na ọnụahịa kachasị dị egwu.
Chọpụta ụgbọ ala mgbazinye kachasị mma maka mkpa gị n'obodo ị na-aga. Anyị nwere onyinye kasịnụ ụgbọ ala mgbazinye si n'akụkụ ụwa niile na ọnụahịa kacha mma.
Y’oburu n’achoghi iwere ugbo ala gi, mana ichoro igha ebe gi na obi iru ala gi, i nwekwara ike ibanye maka ugbo ala mgbazinye. Iji zere ịjụ mmadụ na ịnwe ya ozugbo ị dara, echefula igwe nyocha ụgbọ ala mgbazinye.
N'ime ya ị nwere ike ị nweta ụlọ ọrụ niile buru ibu. Na mgbakwunye, mgbe ị na-ede akwụkwọ n'ịntanetị, ị nwere ike irite uru site na nnukwu ego. Ihe na-anaghị afụ ụfụ. N'ezie, uru ọzọ nke ịgbazite ụgbọ ala mgbazinye bụ na ị nwere ike ijikwa ndoputa gị. Nke a bụ na ị nwere ike gbanwee ma ọ bụ kagbuo ya.
Ndụmọdụ mgbe ịgbazite ụgbọ ala
Na mgbakwunye na ịbụ nzọụkwụ dị mfe, site na nyocha ọchụchọ, ị ga-ama nke ahụ ụgbọ ala ọ bụla nwere ọnụahịa. A ga-akọwa nke a nke ọma na ibe ọ bụla ị ga-enweta. Ọ ga-adabere n'ụdị ụgbọ ala mgbe niile na mgbe ụfọdụ ọbụna ebe anyị na-agbazite ya. Ọ bụ ya mere Renault Clío ma ọ bụ Citroen C1 ma ọ bụ C4 bụ ụfọdụ n'ime nhọrọ dị ọnụ ala. N'ezie, dị ka anyị na-agwa gị, ị ga-elele ya na weebụsaịtị ọ bụla ma gụọ ọnọdụ ahụ nke ọma.
AKW wheneverKWỌ mgbe ọ bụla i nwere ike n'ọdịnihu. Anyị maara nke ọma na ụbọchị dị elu na-eme ka ọnụ ahịa dị oke ọnụ. Fọdụ ụlọ ọrụ chọrọ ka onye ọkwọ ụgbọ ala erughị afọ 25, mana enwere ike ịgbakwunye ụgwọ mgbakwunye ụfọdụ. Cheta na ị ga-ahapụ gas tank dị ka anyị hụrụ ya. Ọ bụ ya mere, ebe o kwere omume, anyị ga-ahọrọ iwu nke sitere na tank zuru ezu / zuru ezu. N'ụzọ dị otú a, anyị ga-ezere ihe ịtụnanya ma anyị ga - enwe ike ijuju mmanụ ụgbọala ebe ọ masịrị anyị, ọ bụrụhaala na anyị ahapụ ya zuru.
Were mkpuchi njem
Ọ bụrụ na ị ga-eme njem mba ofesi ma ịchọrọ izere ụdị nsogbu ọ bụla, nnukwu echiche bụ ịme mkpuchi mkpuchi njem. Onye na-eweta ọrụ anyị IATI Insurance awade widest nso nke njem mkpuchi ona gị mkpa. Na mgbakwunye, site na ịbanye na mkpuchi gị site na weebụsaịtị anyị ị ga-enweta mbelata 5% gbasara ọnụego ọkọlọtọ.
Usoro nkwekọrịta mkpuchi dị mfe, naanị ị ga -
Banye na insurer si website site na ịpị ebe a.
Gosi ebe obibi gi, ebe ị na-aga na ụbọchị ị ga-aga
Pịa na bọtịnụ «Gbakọọ mmefu ego» na ị na-mere
N'oge a, ngwa ọrụ ahụ na-enye gị katalọgụ nke ngwaahịa ọ nwere maka njem gị na ọnụahịa kacha mma. Họrọ nke kachasị gị mma ma jupụta na nkọwa gị iji were ya ma ọ bụrụ na ị nwere mkpuchi gị.
Pịa ebe a tinye akwụkwọ mkpuchi mkpuchi njem gị na mbelata 5%
Ebe ndị ọbịa na-anabata ndị njem nleta kwa afọ
Otu n'ime ebe kachasị ewu ewu maka ndị njem bụ France. Ọ bụ n'ime akpa ebe, dị ka otu nnyocha e bipụtara si dị. N'ime ya ekwuputara na ihe ruru nde mmadụ iri asatọ na ise ahọrọla ebe a, mana n'ezie, ekwesịrị ikwu na ọ bụghị maka obere. Enwere ọtụtụ ebe nkiri na France. Ndị njem nleta na-ahọrọ ifflọ Elu Eiffel dị ka otu n'ime nkwụsị kwesịrị-ịhụ. Fọdụ na-atụ anya ịrịgo ya, ebe ndị ọzọ na-eche ya site na mpụga na ọkachasị mgbe anyanwụ dara.
N'agbanyeghị ogologo ahịrị, Louvre dịkwa mkpa. Ihe anyị ga-ekwukwa banyere Katidral Notre Dame. Ikwesighi ichefu ileta otu n'ime ebe ihunanya, obu ezie na na mpaghara a obula onye obula nwere ahihia a. Mont Saint Michel, ogige nke nwere ulo uka nke aghaghi ihu iji chebara ezigbo mma ya echiche. The Arc de Triomphe, Basilica nke Obi Dị Nsọ na ya mere enwere m ike ịdepụta saịtị ị ga - ahụ, ọbụlagodi, otu ugboro na ndụ gị.
Ebe ọzọ nwere ọtụtụ ndị njem nlegharị anya, nke a na-etinyekwa na France, bụ United States. N’ime ha, e nwekwara ebe ndị mmadụ juru eju karịa ndị ọzọ. N'ezie, ndị njem nleta doro anya.
Times Square: Ebe ama ama ama ama na New York na-ahụ ihe karịrị nde ndị njem iri anọ na-agafe kwa afọ. Naanị ya nnukwu ọhụụ jupụtara na ọkụ, ọ na-eme ka ọ bụrụ iwu ịkwụsị.
Central Park: N'ime obi Manhattan, anyị hụrụ nnukwu ogige a, nke anyị hụgoro n'ọtụtụ fim. Ihe dị ka nde ndị njem iri atọ na ise na-abịa kwa afọ iji hụ mma ya na ịdị ukwuu ya.
Las Vegas: Kedu onye na-arọbeghị nrọ ịlụ Las Vegas?. O doro anya na ebe ọzọ kachasị masị. Ọbụghị naanị maka ebumnuche a, mana maka casinos, egwuregwu anwansi ma ọ bụ nwee ike ịga leta Grand Canyon.
Boston: Ọ bụ obodo nwere nnukwu ọdịnala. Na mgbakwunye, anyị anaghị echefu Cheers ụlọ oriri na ọ restaurantụ andụ na nnukwu onyinye gastronomic ya.
San Francisco: Obodo ọzọ n’ime obodo ndị a kacha leta na United States. Ọ nwere ohere dị ukwuu n'ihe ọ bụla ọ na-enye, ebe ọ bụ na anyị agaghị agabiga oke iji hụ ihe niile anyị chọrọ.
Los Angeles: Anyị enweghị ike ichefu Los Angeles. Ugwu, ebe ndị njem nleta na okomoko ọ na-ekpori bụ ihe a chọrọ.
Spain nọ na ebe nke ato nke ndi njem nleta gara. N'ime nke a, anyị nwere ebe njedebe maka ihe ụtọ niile. Ikekwe, ndị njem na-ahọrọ ụlọ alakụba nke Córdoba, Alhambra na Granada na La Sagrada Familia na Barcelona, ​​dị ka ebe kachasị elu amụma niile. Seville na Reales Alcázares anọghịkwa nso maka nleta kpụ ọkụ n'ọnụ. N'ebe ugwu, Katidral nke Santiago de Compostela bụ ebe nzukọ maka ndị njem ala nsọ na ndị hụrụ nka n'anya. A na-ahụta mmiri nke Segovia ma ọ bụ Katidral nke Burgos dị ka ebe ndị njem nleta.